Tsy manara-penitra izany izay tsy afaka mampiasa ordinatera ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« Mizotra mankamin’ny fizarazarana izany ny zana-bahoaka eto amin’ity firenena ity raha tarafina amin’ny EPP sy CEG manara-penitra vao notokanana tao Soamandrakizay Antananarivo-renivohitra ». Fandiniky ny ray aman-dreny iray izany tamin’ny fahalalana tamin’ny fampitam-baovao fa nosokafana tamim-pomba ofisialy tamin’ny 30 novambra teo tamin’izany fitokanana izany ny taom-pianarana 2020-2021, notarihin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tafa sy dinika nifanaovan’ny samy olom-pirenena no nahavelona ny resaka momba ity tontolon’ny fampianarana ity. « Raitra dia raitra tokoa ireo fotodrafitrasa raha mitaha amin’ny EPP sy CEG maro manerana ny nosy, ary tsy fampitaha mihitsy aza raha ny naseho tamin’ny fahitalavitra », hoy hatrany ity ray aman-dreny naneho ny hagagany.
« Tsy manohitra ny fampiasana ny teknolojia vaovao aho, amin’ilay hoe mampiasa ‘tactile’, fa malahelo mandinika ny tontolon’ny ankamaroan’ny EPP any anivon’ny isam-pokontany an’aliny manerana ny nosy any izay tsy mba manana dabilio hipetrahana fa miondrika amin’ny tany ; izay tsy afaka mampiasa ordinatera ve izany dia tsy manara-penitra ? », hoy kosa ny mpampianatra efa misotro ronono iray. « Manamora amin’ny fanaovana kajy ny fampiasana ny teknolojia saingy manahy ihany aho amin’ny tena famolavolana ny sain’ny ankizy amin’ny fikirakirana ny tarehimarika, satria dia vitan’ny tsindry bokotra kely dia vita ny raharaha. Hitako ho sahirana ny ankizy ankehitriny raha hampiasa io ‘tactile’ io ; dia tsy hahay hanoratra satria ho zatra manindry bokotra sy mamaky teny fotsiny ! », hoy ny fanehoan-keviny. « Misy lojikany, ohatra, ny fampianarana mikajy mampisaina raha hanambatra ny roa ampiana telo isika, fa tsy vita fotsiny amin’ny fampiasana milina fikajiana na telefaonina izay efa hain’ny ankizy maro no mikirakira izany ; misy zavatra tokony ho dinihina ihany amin’ny fomba fampianarana mba tsy ho diso fanantenana isika amin’ny vokatra ho azo aoriana », hoy izy nanohy ny fanazavany.
Fa ny nahagaga ny olona maro dia ny fielezan’ny vaovao fa hoe manao ‘test’ hono vao afaka miditra amin’ireny EPP manara-penitra ireny. ‘Test’ mampametra-panontaniana na dia ny sokajina mpianatra sintonina hanao izany aza.
Hafahafa ny tontolontsika
Maro moa ny zavatra hafahafa sy manahirana ny mandinika ny fanapahan-kevitra raisina eto amin’ity firenena ity. Hafa mihitsy ny laharam-pahamehan’ny mpitondra amin’ny fitantanana ity firenena ity. Raha ny fandraisana ny fampanantenana dia ny sekoly rehetra tsy ankanavaka no atao manara-penitra, tena tsara izany. Ary tsy hisy olona hanohitra mihitsy ka hilaza fa tsy miandrandra sekoly manara-penitra, saingy mba jerena koa izay tena zavatra azo tanterahana mankamin’ny soa iombonana sy filan’ny besinimaro ary tsy mampisy hantsana eo amin’ny samy zanaka Malagasy. Izany no efa nitolomana fahiny toy ny tamin’ny 72, miainga amin’ny fampiasana ny tenin-dreny ihany aloha.
Sarotra ny hilaza hoe tsy fantatry ny mpitondra ny tena laharam-pahamehana mitodika amin’ny tena famahana ny olan’ny fampianarana eto amintsika na dia amin’ny resaka fotodrafitrasa fotsiny aza, saingy ilay fakana ny fon’ny mpifidy amin’ny seho ivelany no toa mahamay, lasa fitaovana politika tsy ilay mahasoa ny tontolon’ny fampianarana. Firifiry akory ny mpianatra any rehetra any na ny dabilio ianarana aza tsy misy ? Ny trano zara fa trano raha mbola azo antsoina hoe trano ihany ? Ny mpampianatra dia io iaraha-mahalala io ny tsy fahampiany sy ny kalitaon’ny am-perinasa amin’ny toerana maro.
Zava-dehibe loatra ity resaka fampianarana ity izay miantoka ny fandrosoana sy fivoaran’ny firenena. Miankina amina singa maro ny fahalavorarian’izany sy fahombiazany, hamolavola olom-banona sy manam-pahaizana amam-pahalalana afaka mandray andraikitra. Anisan’ny ahatanterahan’izany ny fananana politika matotra manome lanja ny mpisehatra rehetra toy ny avy amin’ny sekoly miahy tena izay manana ny toerany lehibe eo amin’ny sehatry ny fampianarana. Ny resaka EPP io noresahana io fa na hatreny amin’ny oniversite aza, dia itrangana tsy fahalavorariana samihafa amin’ny lafiny maro. Ny aretina ‘covid’ moa no lasa fialana olana fa na tsy nisy aza ity areti-mandoza ity, dia efa maro ny zavatra mitarazoka ny fandaminana momba ity tontolon’ny fampianarana ity. Hatreto dia ny fanamafisan-toerana no tazan’ny olona ho misongadina amin’ny fametrahana olona tendrena any amin’ny isan’ambaratongany any, hanomanana ny fifidianana manaraka. Hany ka na ny fahafaha-mihetsika sy maneho hevitra aza, dia arahi-maso akaiky any rehetra any toy ny nahazo ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana nandefasana mpitandro filaminana tany Soavinandriana sao mamory olona. Manginy fotsiny ny hetsiky ny mpiasa mitaky ny rariny amin’ny sehatra samihafa saingy tojo ny iraky ny fitondrana handrava izany ihany koa. Dia izao mijotso izao foana ny fahantran’ny ankamaroan’ny mponina eto amin’ny firenena mandraka ankehitriny, indrindra hatramin’ny hetsiky ny 2009.